Ngaba uyazi ukusebenzisa iibhegi zokulala kwinkampu yangaphandle?
Ulala njani kakuhle ngexesha lenkampu yasebusika? Ukulala ngokufudumeleyo? Ibhegi yokulala efudumeleyo yanele ngokwaneleyo! Unokuthenga ibhegi yokuqala yokulala ebomini bakho. Ukongeza kwimincili, ungaqala nokufunda umxholo olungileyo weengxowa zokulala ukuze uhlale ushushu. Ngethuba nje ...
Ungayikhetha njani intente yangaphandle?
1. Ubungakanani bomzimba / bokusebenza Le yiparameter ebalulekileyo yezixhobo zangaphandle. Ngaphantsi kokusebenza ngokufanayo, ubunzima bunokulingana nexabiso, ngelixa intsebenzo ilingana ngokulinganayo nobunzima. Ngamafutshane, ukusebenza ngokugqwesileyo, iindleko zezixhobo ezinobunzima ...
Ngaba i-barbell squats ifuna iipads zamagxa?
Jonga abantu abaninzi besenza i-barbell squats xa befuna ukujija iphedi eshinyeneyo (igxalaba lephedi), ijongeka intle ngokwenyani. Kodwa okumangalisayo kukuba, kubonakala ngathi zii-novice ezisandul 'ukuziqhelanisa nokuqhekeza ezisebenzisa ezo zinto. Iingcali zomzimba ezithintela amakhulu eekhilogram ze ...
Uyisebenzisa kanjani umqamelo weyoga
Inkxaso yokuhlala ngokulula Nangona le nto ibizwa ngokuba kukuhlala ngokulula, akukho lula kubantu abaninzi abanemizimba eqinileyo. Ukuba uyenza ixesha elide, iyakudinisa kakhulu, ke sebenzisa umqamelo! indlela yokusebenzisa: -Hlala umqamelo kunye nemilenze yakho iwele ngokwendalo. -Amadolo a ...
Ungawazalisa njani ngokuchanekileyo amandla omzimba, kubandakanya inani kunye nenani lamanzi okusela, unaso isicwangciso?
Ngexesha lokomelela, isixa sokubila sikhuphuke kakhulu, ngakumbi ehlotyeni elishushu. Abanye abantu bacinga ukuba kokukhona ubila, kokukhona ulahlekelwa ngamanqatha. Ngapha koko, ukugxila kokubila kukukunceda ulawule iingxaki zomzimba, ke ukubila ...
Uyisebenzisa kanjani ibhanti yoqeqesho ye-TRX? Zeziphi izihlunu onokuthi uzilolonge? Ukusetyenziswa kwayo kungaphaya kokucinga kwakho
Sihlala sibona ibhendi enqunyanyisiweyo ejimini. Le yi-trx ekhankanyiweyo kwisihloko sethu, kodwa ababaninzi abantu abayaziyo indlela yokusebenzisa le band yokuqina kuqeqesho. Ngapha koko, inemisebenzi emininzi. Makhe sihlalutye ezimbalwa ngokweenkcukacha. 1.TRX tyhala isifuba Kuqala lungiselela ukuma. Senza ...
Ukomelela kunceda njani impilo yengqondo
Okwangoku, ukomelela kwelizwe lethu kuye kwaba yindawo yophando eshushu, kwaye ubudlelwane phakathi kokuzilolonga komzimba kunye nempilo yengqondo nako kufumene ingqalelo enkulu. Nangona kunjalo, uphando lwelizwe lethu kule ndawo lusanda kuqala. Ngenxa yokunqongophala ...
Yeyiphi ukhetho lweedumbbell, uya kuyiqonda emva kokufunda eli nqaku
I-Dumbbells, njengesixhobo somzimba esaziwa kakhulu, idlala indima ebalulekileyo ekubumbeni, ekwehliseni ubunzima, nasekufumaneni umsipha. Ayithintelwanga yindawo, kulula ukuyisebenzisa, ngaphandle kwesihlwele, inokukrola yonke imisipha emzimbeni, kwaye ibe lukhetho lokuqala ...
Nguwuphi umahluko phakathi kokuzilolonga ekhaya nasejimini?
Kule mihla, abantu ngokubanzi baneendlela ezimbini zokuba sempilweni. Enye kukuya ejimini uyokuzilolonga, kwaye enye kukuzilolonga ekhaya. Ngapha koko, ezi ndlela zimbini zokomelela komzimba zinezibonelelo zazo, kwaye abantu abaninzi bayaphikisana malunga nefuthe lokuqina kwabo bobabini. Nawe ke ...
Ngaba uyazi ukuba ngawaphi amava ohlukileyo eyoga anokukuzisela wona?
Ngaba wakhe waziva wahlulwe kwaye wahlulwe emzimbeni nasengqondweni yakho? Le yimvakalelo eqhelekileyo, ngakumbi ukuba uziva unganqabisekanga, ngaphandle kolawulo, okanye ulilolo, kwaye unyaka ophelileyo awunakunceda. Ndifuna ngokwenene ukubonakala engqondweni yam kwaye ndiziva ndinxibelelana nam ...
Yeyiphi engcono, i-latex band okanye i-tpe resistance band?
1. Iimpawu ze-TPE yokuxhathisa ibhendi yezinto ze-TPE zinokomelela okuhle kunye namandla eqine, kwaye iziva ikhululekile kwaye igudile. Ikhutshwe ngokuthe ngqo kwaye yenziwe yi-extruder, kwaye ukuqhubekeka kulula kwaye kufanelekile. I-TPE ine-oli ephikisayo ...
I-2021 (39th) i-China Sports Expo ivula kakuhle eShanghai
Ngomhla we-19 kaMeyi, i-2021 (39th) i-China International Sporting Expo Expo (ekuthiwa yi-2021 Sports Expo) ivulwe kakuhle kwi-National Convention and Exhibition Centre (e-Shanghai). ...